प्रागबाट भेट्नका लागि तीन शहरहरू यात्रा समाचार
प्रागबाट भेट्न तीनवटा शहरहरू
मारिएला क्यारिल | | प्रगा, के हेर्ने
चेक गणतन्त्र यो एक शताब्दी पुरानो इतिहास छ र यसले इतिहास, कला र संस्कृति मन पराउनेहरुको लागि यो एक महान पर्यटन गन्तव्य बनाउँछ। पहिलेको बोहेमिया एक दिन शक्तिशाली हब्सबर्गको सम्पत्ति भयो र सोवियत कम्युनिस्टहरूको हातबाट यसले १ 1993 XNUMX until सम्म चेकोस्लोभाकियालाई एकीकृत गर्‍यो जब अन्ततः यसको स्वतन्त्रता प्राप्त भयो।
यो त्यसबेला थियो, '० को दशकमा जब पर्यटन प्रागमा आइपुग्दा अधिक तीव्रताका साथ आइरन पर्दा सधैंभरि खिया लाग्न थालेको थियो। चेक आश्चर्यकर्म धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूलाई चिनिन थाल्यो र विश्वको यस पक्षलाई फेला पार्नु त्यतिबेला विश्वको उत्तम यात्रा थियो। तर प्राग भ्रमण गर्ने ठाउँ मात्र होइन र यदि तपाईं राजधानीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ अन्य तीनवटा शहरहरू छन्: पिल्सेन, सेस्के बुडेजोभिस र फ्रेन्टिस्कोभ्या लाज्ने.
1 प्रागबाट पिल्सेन भ्रमण गर्नुहोस्
2 प्रागबाट फ्रान्टिस्कोभ्या लाज्ने भ्रमण गर्नुहोस्
3 प्रागबाट सेस्के बुडेजोभिस यात्रा
प्रागबाट पिल्सेन भ्रमण गर्नुहोस्
पिल्सेन वा प्लज़ेन गत वर्ष युरोपेली राजधानी संस्कृति थियो र हो, नाम बियर को प्रकार संग गर्नु पर्छ पिलसेन जुन हामी सबैलाई थाहा छ। पालि परम्परा १ XNUMX औं शताब्दीमा मिल्छ जब शहरवासीहरूलाई घरमा बियर बनाउने अनुमति दिइयो।
यो देशको चौथो ठूलो शहर हो, बोहेमियाको पश्चिममा छ र यसको स्थापना १२ 1295। King मा राजा वेन्सेलास द्वितीयको हातमा चार नदीको संगममा भएको हो। यसको स्थानका कारण यो द्रुत गतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण शहर थियो, त्यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आर्थिक र सांस्कृतिक तह रहेको थियो। त्यहाँ गोथिक, पुनर्जागरण, बारोक र १ th औं शताब्दीको वास्तुकलाको भवनहरू छन्। जब बियर बनाउने वास्तवमै महत्त्वपूर्ण कारखाना स्थापना गरियो जुन आज पनि काम गर्दछ।
Pilsen यो प्रागदेखि 90 ० किलोमिटर टाढा छ र तपाईं रेलबाट त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। ट्रेनहरू हरेक घण्टा राजधानीबाट प्रस्थान गर्दछन्। बदल्मा, पिल्सेनसँग एक एकीकृत यातायात प्रणाली आईडीपी छ, जसले एकल टिकटलाई सम्पूर्ण प्रणाली मार्फत सार्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ बिभिन्न "जोनहरू" छन् र टिकटको मूल्य तपाईको माध्यमबाट जाँदै गरेको जोनमा निर्भर गर्दछ। एक पर्यटक जस्तै यो बाइक भाँडामा राख्न उत्तम छ.
त्यहाँ एक पटक पुरानो सहरमा हिंड्नुहोस् यो केहि बाध्यता हो पिल्स्नर अर्क्सेल डिस्टिलरीको भ्रमण, स्पष्ट सलाखाहरू बाहिर जानुहोस्, थाहा छ पिल्सेन क्याथेड्रल, सिनागोग र संग्रहालयहरू र राम्रो मौसमको साथ तपाईंले शहर वरिपरिका जsts्गल र नदीहरूको आनन्द लिनुपर्दछ।
तपाई चाहानुहुन्छ बियर मा नुहाउनु? तपाईं यो Purkmistr डिस्टिलरीमा गर्न सक्नुहुनेछ, एक कम्पनी जसले स्पा सेवाहरू र बियर-आधारित मसाज प्रस्ताव गर्दछ। बियर बाथको मूल्य २eयूरो छ र ती १ 16 व्यक्तिको समूहको लागि हो। तपाइँ साइन अप गर्नुहुन्छ?
प्रागबाट फ्रान्टिस्कोभ्या लाज्ने भ्रमण गर्नुहोस्
यो शहर हो स्पा वा शहर -spa जुन जर्मनीको सिमाना नजिक छ, प्राग बाट दुई घण्टा रेल सवारी। यो पिल्सेन भन्दा सानो तर सुन्दर शहर हो र शताब्दीयौंदेखि आरामदायी गन्तव्य भएको छ।
यसमा केही तातो स्प्रि .हरू छन् जसको पानी खनिजहरूले समृद्ध छन् र तिनीहरू १ the औं शताब्दी देखि परिचित छन्। यसैले, १ 24 औं शताब्दीको अन्तमा शहर कैसर फ्रान्जेन्सडोर्फ वा फ्रान्सेन्सबाडको नामले स्थापित भयो र कुलीन वर्गमा अझ प्रख्यात भए। यसको उत्कृष्टमा त्यहाँ २ activity खनिज तातो स्प्रि activityहरू थिए गतिविधिमा आज जुन थोरै कम छ। यो एउटा गन्तव्य थियो गोएटे आफैले मन पराउने, यति धेरै कि उनी यो जोन स्ट्रॉस, काफ्का र बीथोभन लगायत अरुहरु मध्ये "पृथ्वीमा स्वर्ग" थिए।
यो वास्तुकला सुन्दर साइट हो, धेरै नियोक्लासिकल भवनहरू, रमणीय पार्कहरू, र पेस्टल-पेन्टेड घरहरू सहित। यदि तपाईंसँग समय छ भने, मेरो सल्लाह के छ भने तपाईं पाँच किलोमिटर यात्रा गर्नुहुन्छ, यो केहि पनि छैन, र नजीक जानुहोस् अर्को सुन्दर शहर चेबलाई चिन्नुहोस् जहाँ घरहरू सबै काठले बनेका छन्। यो वरपरको पहाडी पर्वतीय दृश्यहरूले घेरेको छ र प्राकृतिक रिजर्वमा समाहित भएको छ र माटो ज्वालामुखीहरु कुनै समय यहाँ अवस्थित ज्वालामुखी क्रियाकलापको अवशेषको रूपमा रहेको छ।
रिजर्भलाई Soos र भनिन्छ त्यहाँ तालहरू र पानीका साथ मोरहरू छन् जुन गैसियस कार्बन डाइअक्साइड र खनिजहरू समावेश गर्दछ। एक सच्चे प्रागैतिहासिक भूदृश्य जुन शैक्षिक मार्गले कभर गरिएको छ जसले तपाईंलाई पूर्ण रूपले साँघुरो काठको प्लेटफर्महरूमा दलदलमा पुर्‍याउँछ। तपाईं भूवैज्ञानिक पार्कको भ्रमण गर्नुहुन्छ र त्यहाँ एउटा संग्रहालय छ जुन पृथ्वी र प्रकृतिको इतिहाससँग सम्बन्धित छ र जीवन आकारको प्रागैतिहासिक जनावरहरूको प्रतिकृतिहरू।
El स्पा फ्रान्सिस्कोभ्या Lazne यो एक समयको लागि आफैलाई लाड गर्नको लागि ठाउँ हो: २० चिसो स्प्रि ,हरू, औषधीय ग्याँसहरू र प्राकृतिक पीटको साथ। तिनीहरू भन्छन कि तिनीहरू महिला समस्याहरू, बाँझपन, हृदय अवस्था, र लोकोमोटर समस्याहरूको लागि राम्रो छन्। हेर्नुहोस् विश्वास गर्दैछ, तर केहि समयको लागि आफुलाई pampering चोट गर्दैन। र यदि तपाइँ बच्चाहरूसँग जानुहुन्छ र ग्रीष्म isतुमा तपाइँ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ एक्वाफोरम: दुई वयस्कहरू र दुई बच्चाहरूको लागि परिवार पास १ pass यूरो मात्र लाग्छ। एक सम्झौता!
प्रागबाट सेस्के बुडेजोभिस यात्रा
यो बोहेमियाको दक्षिणमा छ र यो यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण शहर हो। यो राजा ओट्ट्कर द्वितीय द्वारा स्थापित गरिएको थियो र यसको पहिलो बसोबासहरु बोहिमियन वनबाट माथिल्लो अस्ट्रियाबाट ल्याइएको थियो। यद्यपि त्यहाँ धेरै जर्मन बसोबास गर्नेहरू थिए, जुन मैले माथि उल्लेख गरेको अरू दुई शहरहरूमा, दोस्रो युद्ध पछि परिस्थितिहरू आमूल परिवर्तन भयो र आज ती सबै झण्डै चेकमा छन्।
Ceské Budejovice पनि यो बियरमा बस्ने सहर हो। यो १ dis औं शताब्दीदेखि नै डिस्टिल गरिएको छ र पवित्र रोमी सम्राटको शाही डिस्टिलरीको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यो यसका निर्माता हो बुडवीस मूल, एउटा जुन अमेरिकी ब्रान्डले प्रतिलिपि गरेर शुरू गर्‍यो, त्यसैले एक बार वा रेस्टुरेन्टमा यो प्रयास गर्नु आगन्तुकको रूपमा हाम्रो कर्तव्य हो। बुडवार डिस्टेलरीले राम्रो गाईडेन्ड टुरहरू प्रस्ताव गर्दछ जुनeयूरो खर्च गर्छ र तपाइँ फिल्महरू र विशेष प्रदर्शनहरूको साथ मिनी संग्रहालयको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
सहर बिभिन्न शैलीका धेरै ऐतिहासिक भवनहरू छन्, बारोक, पुनर्जागरण, गोथिक। शहर हलमा यसको काँसाको गार्गोइल्स, १omin औं शताब्दीको चर्चसहित डोमिनिकन कन्भेन्ट, चौडा मध्य केन्द्र, Belle Époque शैली रेल स्टेशन, दिव्य, जन Zizka महल को खंडहर, Hluboká महल, बाहिरी भागमा, र कालो टावर उदाहरणका लागि, १ XNUMX औं शताब्दीबाट यसको मुख्य आकर्षणहरू मध्ये एक हो।
रेलहरूले प्रागलाई हरेक घण्टा सेस्के बुडेजोभिससँग जोड्छ, यात्रा साढे दुई घण्टा लाग्छ र प्रति वयस्क6यूरो लाग्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, प्राग सुन्दर गन्तव्यहरूको देशको प्रवेशद्वार मात्र हो र यहाँ तपाईसँग तीन विकल्पहरू छन् जुन ग्रीष्म inतुमा जीवन र रंगमा आउँदछ। तिनीहरू तपाईंको लागि पर्खिरहेका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » प्रगा » प्रागबाट भेट्न तीनवटा शहरहरू
पोर्टो रिकोमा मोरो दि सान जुआनको इतिहास
प्रोभेन्सको वायलेट खजानाहरू पत्ता लगाउने मार्ग